Madaxweyne Gaas: Madasha Dowlad goboleedyada waxay Aqbaleen inay ka qeybgalaan Shirka Muqdisho | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Gaas: Madasha Dowlad goboleedyada waxay Aqbaleen inay ka qeybgalaan Shirka Muqdisho
GAROOWE – Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in madaxda dowlad goboleedyada ay aqbaleen casumaadii uga timid Madaxweyne Farmaajo ee ahaa inay ka soo qaybgalaan shir ka dhici doona magaalada Muqdisho 28-ka bishan.
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay iney muhiim tahay in dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ay wada shaqeeyaan si ay u yaraato xasarada labada dhinac ka dhex taagan.
Shirkan oo u dhaxeeya Madaxda Dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada ayaa looga hadli doonaa in labada dhinac xaliyaan khilaafka ka dhex jira iyo sidii loo xoreyn lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab.
Anigoo ku hadlaya Madasha dowlad goboleedyada, waxaa aqbalnay Casuumaada Madaxweynaha dowladda Federaalka noo soo diray oo ah 28 bishan inaan ka qeyb galno shirka ka dhici doona magaalada Muqdisho”ayuu yiri C/wali Gaas.
Madaxda maamul goboleedyada ayaa horaantii bishan ku kulmay magaalada Kismaayo,waxayna ku dhiseen gole ay ku mideysan yihiin oo la magic baxay Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada,waxaana guddoomiye looga dhigay Madaxweynaha Puntland,halka guddoomiye kuxigeena u yahay Madaxweynaha Hirshabelle.